welding | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Jointing Metal miaraka amin'ny Brazing sy Welding Misy fomba maro azo ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny metaly, ao anatin'izany ny welding, ny brazing ary ny soldering. Inona no maha samy hafa ny welding sy ny brazing? Inona no maha samy hafa ny brazing sy ny soldering? Andao hizaha ireo fanavahana misy tombony azo ampitahaina ary koa fampiharana mahazatra. Ity resaka ity dia hampitombo ny fahalalanao ny vy… Hamaky bebe kokoa
Sokajy Technologies Tags brazing, mitambatra mitambatra, asa manao ahoana, ahoana ny fiasan'ny welding, metaly brazing fampidirana, metaly mitambatra fampidirana, mitambatra brazing, welding welding, vy vy, heater brazing vy, vy fampidirana vy, vy vy, heater vy vy, welding
Inona ny fametahana afindrafana?
Miaraka amin'ny fantsom-pandrefesana fampidirana ny hafanana dia ampidirina amin'ny fitaovana elektromagnetika. Ny hafainganam-pandeha sy ny marina
ny fantsom-panafody fampidirana dia mahatonga azy ho tsara amin'ny fantsom-bozaka sy fantsona. Amin'ity dingana ity dia mandalo coil fampidirana haingana be ny fantsona. Rehefa manao izany izy ireo, dia hafanaina ny sisiny avy eo potserina miaraka mba hamolavolana kofehy lava. Ny welding induction dia mety indrindra amin'ny famokarana avo lenta. Ireo mpandrindra induction dia azo atao miaraka amin'ny lohan'ny fifandraisana koa, ary ahodina ho lasa izy ireo
dual purpose systems.
Inona no soa?
Ny fantsom-pandrefesana maharitra lava dia dingana azo itokisana sy avo lenta. Ny fanjifana herinaratra ambany sy ny fahombiazan'ny rafitra fanaraha-maso DAWEI Induction dia mampihena ny vidiny. Ny fifehezana sy ny famerimberenana azy ireo dia mampihena ny scrap. Marefo ihany koa ny rafitray, ny fampifanarahana ny entana mandeha ho azy dia miantoka ny herin'ny famoahana feno amin'ny haben'ny fantsona. Ary ny dian-tongotr'izy ireo kely dia manamora ny fampidirana na famerenana azy ireo amin'ny tsipika famokarana.
Aiza izy io no ampiasaina?
Ny fantsom-pandrefesana dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fantsona sy fantsom-bozaka ho an'ny fantsom-boaloboka vy tsy misy fangarony (andriamby sy tsy andriamby), aliminioma, karbonina ambany ary alim-bolo avo lenta (HSLA) ary alim-bary maro hafa
Sokajy FAQ Tags serivisy avo lenta, induction welding, pifidianana, raki-peo mahazatra, welding, fantsom-podiarana varahina, fantsom-podiarana